Himalaya Dainik » प्रधानमन्त्री अोलीले सालीलाई बनाए राजदुत, अाखिर को हुन उनि ?
२९ कार्तिक २०७५ |
प्रधानमन्त्री अोलीले सालीलाई बनाए राजदुत, अाखिर को हुन उनि ?
सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाउने र रिक्त भएको पदमा डा. अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको छ।
बोलको चर्चित गीतकी गायिका हुन् शाक्य । नेकपाका नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै जोडबलमा उनी राजदूत बनेकी हुन् । नाताले शाक्य ओलीकी ‘साली’ हुन् । निकटस्थहरूका अनुसार ओलीले उनलाई ‘साली’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यको आफ्नै बहिनी भने होइनन् ।
नेपाल टेलिभिजनकी पूर्व समाचार प्रस्तोता समेत रहेकी शाक्यलाई ओलीकै जोडबेलमा एक समय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपनिर्देशक पनि बनाइएको थियो । तर, यो पदका लागि मापदण्ड नपुगेपछि उनको जागिर गुमेको थियो । अनलाईनखबरबाट
प्रकाशित मिति २९ कार्तिक २०७५, बिहीबार १५:३०